Fedora 28 Umhlahlandlela Wokufaka Isinyathelo Ngezinyathelo | Kusuka kuLinux
Umhlahlandlela Wokufaka we-Fedora 28 Isinyathelo Ngesinyathelo
Ngemuva kokukhishwa okusemthethweni kwenguqulo entsha yeFedora 28 Esiphawula ngakho lapha kubhulogi, abasebenzisi bayo abaningi baqale ukufuduka besuka kuFedora 27 baya enguqulweni entsha.
Noma sinenketho yokukwenza ngaphandle kokufaka kabusha, kuhlale kunconywa ukufaka kusuka ekuqaleni plus yabo bonke abasebenzisi abasha kufanele, futhiKungakho sabelana nawe ngalo mhlahlandlela wokufaka olula.
Lo mhlahlandlela wenzelwe ama-newbies, futhi ezinye izinguquko zenziwe kunqubo yokufaka okwenza kube lula ukusebenziseka.
1 Landa futhi ulungiselele isabelo sokufakwa okuphakathi
1.1 Imidiya yokufaka i-CD / DVD
1.2 Indawo yokufaka ye-USB
2 Ungayifaka kanjani i-Fedora 28?
Landa futhi ulungiselele isabelo sokufakwa okuphakathi
Into yokuqala okufanele siyenze ukulanda isithombe sesistimu, esingasiqopha kwi-DVD noma kwi-USB drive, sizoyilanda kwiwebhusayithi yayo esemthethweni. isixhumanisi lapha.
Uma lokhu sekwenziwe siqhubeka ngokwakhiwa kwendawo yokufaka.
Imidiya yokufaka i-CD / DVD
Windows: Singashisa iso nge-Imgburn, UltraISO, Nero noma olunye uhlelo ngaphandle kwazo ku-Windows 7 futhi kamuva kusinika ithuba lokuchofoza kwesokudla ku-ISO.
Linux: Ungasebenzisa ikakhulukazi leyo eza nezindawo zokuqhafaza, phakathi kwazo kukhona, iBrasero, k3b, neXfburn.
Windows: Ungasebenzisa i-Universal USB Installer noma iLinuxLive USB Creator, zombili kulula ukuzisebenzisa.
Yize kukhona futhi ithuluzi iqembu leFedora elisinikeza lona ngqo, liyabizwa I-Fedora Media Writer kusuka ekhasini leRed Hat lapho ichaza khona ukuthi isebenza kanjani.
Linux: Inketho enconyiwe ukusebenzisa umyalo we-dd, esichaza ngawo ukuthi sinayiphi indlela isithombe seFedora nokuthi sikuphi lapho sine-usb yethu khona.
Imvamisa indlela eya ku-pendrive yakho imvamisa / i-dev / sdb lokhu ongakuhlola ngomyalo:
Usuvele ukhonjwe kufanele usebenzise umyalo olandelayo
Ungayifaka kanjani i-Fedora 28?
Kakade sesifakelwe nendawo yethu yokufaka, siqhubeka nokuyiqalisa kukhompyutha yethu ezokhombisa isikrini esilandelayo uma senza inqubo yokurekhoda isithombe sohlelo kahle:
Sizokhetha inketho yokuqala futhi kuzofanele siyilinde ukuthi ilayishe konke okudingekayo ukuqala inqubo yokufaka.
Kwenziwe lokhu silinda kancane, futhi kuzovela esinye isikrini okusinika ithuba lokukwazi ukuhlola uhlelo ngaphandle kokufaka (Imodi Ebukhoma) noma inketho yokuqala inqubo yokufaka.
Sizocofa ukufaka futhi i-Immediate Wood izovula isilekeleli sokufaka seFedora.
Lapha Izosicela ukuthi sikhethe ulimi lwethu kanye nezwe lethu. Uma lokhu sekwenziwe, siyaqhubeka.
Uma wake wafaka i-Fedora ezinguqulweni ezedlule, ungaqaphela ukuthi isifaki manje sinezinketho ezimbalwa kuphela.
Lapha kuphela sizolungisa indawo yethu yesikhathi uma kunesidingo.
Uma kungenjalo kuphela sizokhetha inketho "Indawo yokufaka"
Nansi kusinikeza ithuba lokukhetha indlela i-Fedora ezofakwa ngayo:
Sula yonke i-disk ukufaka i-Fedora
Siziphatha ngokwahlukana kwethu, sikhulisa usayizi wediski, susa ukwahlukanisa, njll. Inketho enconyiwe uma ungafuni ukulahlekelwa imininingwane.
Ngemuva kwalokho sizokhetha ukwahlukanisa ukufaka i-Fedora noma ukhethe i-hard disk ephelele. Uma kwenzeka ukhetha ukwahlukanisa, kuzodingeka sikunikeze ifomethi efanelekile, esele kanjena.
Sekuvele kuchaziwe lokhu, sizocindezela ukwenziwe futhi sizobuyela esikrinini esikhulu iwizadi yokufaka, lapha inkinobho yokufaka izonikwa amandla futhi inqubo izoqala.
Ekugcineni kuphela kuzofanele sisuse imidiya yokufaka bese siqala kabusha.
Ekuqaleni kwesistimu Kuzosetshenziswa iwizadi yokumisa lapho singalungiselela khona umsebenzisi wethu wesistimu nge-password.
Kanye nokunika amandla noma ukukhubaza ezinye izilungiselelo zobumfihlo nokuvumelanisa amanye ama-akhawunti we-imeyili.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Umhlahlandlela Wokufaka we-Fedora 28 Isinyathelo Ngesinyathelo
UMiguel Cisneros kusho
Ukuqhubeka nokwenza izixazululo zemithombo evulekile ngaphandle kokuqondiswa, kungaba nomphumela omuhle ngoba ubuhlakani bokufakelwa buqhubeka nokukhula futhi ngokuhamba kwesikhathi inguquko nokubusa kwamakhompiyutha esintwini kungenzeka ...
Phendula uMiguel Cisneros
Sawubona bheka, nginenkinga, kuyenzeka ukuthi ngilande i-iso 28 ye-linux ekhasini ngoba ku-fedora write ngithola kuphela i-26 engikhetha inketho yokwenza ngokwezifiso ukukhetha isithombe se-iso 28 engisilanda ngiyasibhala futhi yonke inqubo ijwayelekile futhi ilungile kodwa-ke uma ngiya ukuyifaka ngithola ukuthi iso lishayisile .. kulokhu yini engingayenza?
Zama ukuhamba nokuhlola i-MD5 ukuqinisekisa ukuthi i-ISO ayonakalisiwe.
I-AppImageLauncher: qalisa kalula futhi uhlanganise izinhlelo zokusebenza ku-Appimage